Akụkọ - Ihe ị ga-achọ na Nyochaa Egwuregwu
Ihe ị ga-ele anya na Nyochaa Egwuregwu
Ndị na-egwu egwuregwu, ọkachasị ndị siri ike, bụ ndị dị oke egwu, ọkachasị mgbe ị na-ebule nyocha zuru oke maka igwe egwu egwuregwu. Ya mere, gịnị ka ha na-achọ mgbe ha na-azụ ahịa?
Nha na Mkpebi
Akụkụ abụọ a na-aga aka na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị mbụ a na-atụle tupu ịzụta ihe nlekota. Ihuenyo buru ibu dị mma karịa mgbe ị na-ekwu maka egwuregwu. Ọ bụrụ na ime ụlọ ahụ kwere ya, họrọ maka 27-incher iji nye ọtụtụ ụlọ maka ndị na-ese onyinyo anya.
Mana nnukwu ihuenyo agaghị adị mma ma ọ bụrụ na o nwere mkpebi crappy. Chọsie ike ma ọ dịkarịa ala ihuenyo HD (nkọwa dị elu) nwere mkpebi 1920 x 1080 kachasị elu. Itorsfọdụ ndị nlele ọhụụ iri abụọ na asaa na-enye Wide Quad High Definition (WQHD) ma ọ bụ 2560 x 1440 pikselụ. Ọ bụrụ na egwuregwu ahụ, yana igwe egwu egwuregwu gị, na-akwado WQHD, a ga-emeso gị ihe ngosi mara mma karịa HD zuru oke. Ọ bụrụ na ego abụghị nsogbu, ị nwedịrị ike ịga Ultra High Definition (UHD) na-enye pikselụ 3840 x 2160 nke ebube eserese. Nwekwara ike ịhọrọ n'etiti ihuenyo nwere akụkụ 16: 9 na nke nwere 21: 9.
Ume ume na nzaghachi Pixel
Ume ume ọhụrụ bụ ugboro ole nyocha na-ewe iji megharịa ihuenyo ahụ na nke abụọ. Ọ tụrụ na Hertz (Hz) na elu nọmba pụtara obere blurry oyiyi. A na-atụle ọtụtụ ndị nlekota maka iji ha mee ihe na 60Hz nke dị mma ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ. Egwuregwu na-achọ ma ọ dịkarịa ala 120Hz maka nzaghachi onyonyo ngwa ngwa ma bụrụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-ezube igwu egwuregwu 3D. Nwekwara ike ịhọrọ maka ndị nlekota oru nwere G-Sync na FreeSync nke na-enye mmekọrịta yana kaadị eserese akwadoro iji nye ohere ume ume na-agbanwe agbanwe maka ahụmịhe egwuregwu dị nro. G-Sync chọrọ ihe eserese ndị dabeere na Nvidia ebe FreeSync na-akwado AMD.
Nzaghachi pikselụ ihe nlere ahụ bụ oge pixel nwere ike ịgbanwe site na oji gaa ọcha ma ọ bụ site na otu ndò nke isi awọ gaa na nke ọzọ. Ọ tụrụ na milliseconds na ala na nọmba na ngwa ngwa bụ pikselụ nzaghachi. Nzaghachi pikselụ ngwa ngwa na-enyere aka belata pikselụ mmụọ nke eserese na-agagharị ngwa ngwa gosipụtara na nyocha nke na-eduga na foto dị nro. Ezigbo azịza nke pixel maka igwu egwuregwu bụ 2 milliseconds mana 4 milliseconds kwesịrị ịdị mma.
Panel Technology, Ntinye vidiyo, na Ndị Ọzọ
Ngwongwo Nematic gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ TN bụ ndị dị ọnụ ala ma ha na-enye ọnụego ume ọhụrụ ngwa ngwa na nzaghachi pixel na-eme ka ha zuo oke maka egwuregwu. Agbanyeghị, ha anaghị enye ọtụtụ akụkụ nlele. Vertical Alignment or VA and In-Plane Switching (IPS) pan nwere ike inye ọdịiche dị elu, agba dị oke mma, na akụkụ nlele sara mbara mana enwere ike ịpụta ihe onyonyo mmụọ na ihe ngosi.
Ihe nlere anya na ntinye vidiyo dị iche iche dị mma ma ọ bụrụ na ị na-eji ọtụtụ usoro egwu egwu dịka consoles na PC. Otutu HDMI ọdụ ụgbọ mmiri dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe n'etiti isi iyi vidiyo dị ka ụlọ ihe nkiri nke ụlọ gị, njikwa egwuregwu gị, ma ọ bụ igwe egwu egwuregwu gị. DisplayPort dịkwa ma ọ bụrụ na nyocha gị na-akwado G-Sync ma ọ bụ FreeSync.
Monfọdụ ndị nlekota nwere ọdụ ụgbọ USB maka ịgba egwu ihe nkiri yana ndị ọkà okwu nwere subwoofer maka usoro ịgba egwu zuru ezu.
Kedu ihe nlele kọmputa dị mma?
Nke a dabere na mkpebi ị na-ezube na ókè oche ị nwere. Ọ bụ ezie na ibu na-adịkarị mma ile anya, na-enyekwu gị ohere ihuenyo maka ọrụ yana nnukwu onyonyo maka egwuregwu na ihe nkiri, ha nwere ike gbatịa mkpebi ntinye dị ka 1080p ruo na njedebe nke nghọta ha. Nnukwu ákwà ngebichi na-achọkwa ohere karịa na desktọọpụ gị, yabụ anyị ga-akpachara anya ịzụta nnukwu ultrawide dị ka JM34-WQHD100HZ na ndepụta ngwaahịa anyị ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-egwu egwu na nnukwu tebụl.
Dị ka usoro isi mkpịsị aka, 1080p dị mma ruo ihe dị ka sentimita iri abụọ na anọ, ebe 1440p dị mma ruo na sentimita iri atọ. Anyị agaghị akwado ihuenyo 4K nke pere mpe karịa 27 sentimita asatọ ebe ọ bụ na ị gaghị ahụ ezigbo uru nke pikselụ ndị ahụ na obere oghere site na mkpebi ahụ.
Ndi 4K Monitors dị mma maka egwuregwu?
Ha nwere ike ịbụ. 4K na-enye ọkwa dị elu nke egwuregwu zuru ezu na egwuregwu ikuku nwere ike inye gị ọkwa ọhụụ nke imikpu onwe gị, ọkachasị na ngosipụta buru ibu nke nwere ike igosipụta ọtụtụ pikselụ ahụ n'ebube ha niile. Ihe ngosi ndị a dị elu na-eme n'ezie n'ezie n'egwuregwu ebe ọnụego etiti na-adịghị mkpa dị ka nghọta doro anya. Nke ahụ kwuru, anyị na-eche na ndị nlele ọnụọgụ ume dị elu nwere ike ịnapụta ahụmịhe ka mma (ọkachasị n'egwuregwu na-agba ọsọ ọsọ dị ka ndị na-agba ụta), ọ gwụla ma inwere akpa miri emi ka ịpụpụ na kaadị eserese dị ike ma ọ bụ abụọ, ị bụghị na-aga inweta ọnụego ndị ahụ na 4K. Ihe ngosi 27-inch, 1440p ka bụ ebe dị ụtọ.
Buru n'uche ihe nlere anya ugbu a na - ejikọtakarị ya na teknụzụ njikwa dị ka FreeSync na G-Sync, yabụ lelee maka teknụzụ ndị a na kaadị eserese kwekọrọ mgbe ị na-eme mkpebi nyocha egwuregwu. FreeSync bụ maka kaadị eserese AMD, ebe G-Sync na-arụ ọrụ naanị na GPU nke Nvidia.
Kedu nke ka mma: LCD ma ọ bụ ikanam?
Azịza ya dị nkenke bụ na ha abụọ bụ otu. Azịza toro ogologo bụ na nke a bụ ọdịda ahịa ụlọ ọrụ na-ebufe ngwaahịa ya nke ọma. Taa ọtụtụ ndị nlele na-eji teknụzụ LCD ejiri ọkụ na-acha ọkụ, yabụ ọ bụrụ na ị na-azụ ihe nlele ọ bụ ihe ngosi LCD na ikanam. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara teknụzụ LCD na teknụzụ LED, anyị nwere ntuziaka anyị raara nye ya.
Nke ahụ kwuru, enwere OLED iji tụlee, ọ bụ ezie na ogwe ndị a enwebeghị mmetụta na ahịa desktọọpụ. Igwe OLED jikọtara agba na ọkụ n'ime otu ogwe, amaara maka agba ya na agba dị iche. Ọ bụ ezie na teknụzụ a na-ebili mmiri na telivishọn ruo afọ ole na ole ugbu a, ha na-amalite ịmalite ịme ihe ntanetị n'ime ụwa nke ihe nlele desktọọpụ.
Kedu ụdị nyocha kacha mma maka anya gị?
Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na nsogbu anya, chọọ ndị nlekota nwere sọftụwia etinyere na ntanetị, ọkachasị nzacha ndị ahaziri nke ọma iji belata nsogbu anya. Ezubere ihe nzacha a iji gbochie ọkụ na-acha anụnụ anụnụ, nke bụ akụkụ nke ụdịdị dị iche iche nke na-emetụta anya anyị kachasị ma bụrụkwa maka ọtụtụ nsogbu nsogbu anya. Agbanyeghị, ịnwekwara ike ibudata ngwanrọ sọftụwia anya maka ụdị nyocha ọ bụla ị nwetara